Kala Xadeynta Dastuuriga Ah ee Awoodaha Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada – Sen. Abshir Axmad
Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay soo martay marxalo kala duwan waxaana soo xukumay dowlado rayid ah iyo dowlad militeri ah. Hab-dhaqanka siyaasadeed iyo midka maamul ee Dalka wuxuu intiisa badan ka soo jeedaa Dowladahaas ka hanaqaaday Dalka intii u dhaxeysay 1960kii – 1991kii; Saraakiisha Dowladda ee maanta leh waayo-aragnimo dowladeed waxay intooda badan soo shaqeeyeen ama ka soo minguursadeen xilliyadaas oo uu nidaamka xukunka dalku ahaa nidaam ay awoodda siyaasadeed iyo mida maamul ku uruursan tahay gacanta (Unitary System) Dowladda Dhexe.
Awoodaha U Gaarka Ah Dowlada Federaalka
Arrimaha Dibadda oo ay Xukuumaddu Federaalku leedahay awooda jaangoynta siyaasada Arrimaha Dibadda ee Dalka, iyada keliya ayaana ku mateleysaa Qaranka fagaareyaasha caalamiga ah iyo kuwa goboleed.
Difaaca Qaranka oo ay si gaar ah ugu xilsaaran tahay Xukuumadda Federaalka in ay dhisto Ciidamo Qaran oo suga nabadda, gobonnimada iyo ammaanka Qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo badbaadinta shacabka iyadoo la adeegsanaayo adeegyada ciidamada amniga oo ay ku jiraan Ciidanka Xoogga Dalka, Nabadsugidda, Ciidanka Booliska, iyo Ciidamada Asluubta sida ku qeexan 126aad (1) ee Dastuurka kummeelgaarka ah ah.
Jinsiyadda iyo Socdaalka oo awoodda iyo mas’uuliyaddeeda ay si gaar ah u yeelanayso Xukuumadda Federaalka, waxa ayna dejineysaa siyaasada lagu maareynayo dhaqdhaqaaqa iyo aqoonsiga muwaadiniinta iyo ajaanibta iyada oo abuureysa baro cayiman oo laga soo galo Dalka kana hortageysa soo galootiga ku soo galaya Dalka si sharcidarro ah.
Siyaasada Lacagta taas oo ay Xukuumadda Federaalka dejineyso siyaasadda guud ee lacagta dalka iyada oo diiradda saaraysa la dagaallanka sicir bararka (qiimo dhaca lacagta) iyo sidii sare loogu qaadi lahaa qiimaha shilin Soomaaliga. Sidoo kale, siyaasadda lacagta waxaa xiriir toos ah la leh kobcinta dhaqaalaha Dalka iyo siyaasadaha lagu horumarinayo maalgashiga iyo waxsoosaarka.
Dhismaha goleyaasha sharcidejinta iyo fulinta ee maamulada dowladaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka waana awood u gaar ah dowlad goboleedka waxaana lagu nidaaminayaa si waafaqsan Dastuurada Maamul Goboleedyada sida uu xeerinayo 120aad ee Dastuurka kummeelgaarka ah, wax faragelin ahna kuma laha hay’ad ka mid ah hay’adaha Xukuumada Federaalka sida Wasaarada Arrimaha Gudaha iyo Federaalka iyo kuwo kaleba ee Dowlada Federaalka.
Ilaalinta nolosha iyo hantida muwaadiniinta iyo dhawrista xasiloonida iyo ammaanka deegaanadooda iyaga oo adeegsanaya ciidamadooda boliiska kaligood ama kaashanaya ciidammada booliska federaalka sida ku cad 126aad ee Dastuurka kummeelgaarka ah.
Bixinta adeegyada dowladeed ee bulshada sida Caafimaadka & Waxbarashada & adeegyada la xiriira Biyaha, Beeraha, Xannaanada xoolaha, Daaqa iyo deegaanka dabiiciga ah, La dagaallanka nabaadguurka iyo ilaalinta deegaanka, xiriirinta hoggaanka dhaqanka iyo horumarinta xeerdhaqanka Soomaaliyeed, xiriirinta culimada diinta, iyo arrimaha dhallinyarada sida ku cad 52aad ee Dastuurka kummeelgaarka ah.
Awoodaha Wada Xaajoodka U Baahan
Isla Xisaabtanka Labada Heer Ee Federaalka